University of Sheffield - Study na United Alaeze. Education Bro
University of Sheffield Nkọwa
Echefukwala atụle University of Sheffield
Idebanye aha na University of Sheffield
The University of Sheffield e tọrọ ntọala ihe karịrị otu narị afọ gara aga, -tọrọ ntọala na ọchịchọ na ego nkwado nke ndị Sheffield. Ha chọrọ guzosie a mahadum nke ga-erite uru ha aku na uba, ahụ ike na ụmụ.
Ndị a anya-ahụ ụzọ nke ọma ikom na ndị inyom nwere ike na-eche na ihe ga-eso. Taa anyị na-a ụwa na obodo na anyi edebe erukwa gburugburu ụwa n'ime n'elu 150 mba. Dị ka anyị obodo, Anyị ọrụ na ụmụ akwụkwọ nwere mgbọrọgwụ na njikọ nile na mbara ala anyị.
Ihe anyị na-anọgide na-eme na-adabere n'ihe anyị ụkpụrụ na-esite na anyị okobot ụkpụrụ. Anyị si emeso akpali otutu mmekota gafee isiokwu ebe na ndị mmadụ n'otu n'otu, ulo oru na òtù dozie ihe ịpị nsogbu anyị na-enwe, ma n'akụkụ ụlọ ha na gburugburu ụwa.
N'ịbụ a Civic mahadum pụtara na anyị bụ ebe a na-emeghe arụmụka, n'ihi na-arụ ọrụ ọnụ na-edozi nsogbu na-eme ka mmekọrịta nke aka ma na-akpali ọhụrụ echiche. Anyị na-emeghe ka ndị mmadụ, ịgbanwe na-ekwe omume.
Anyị na-tọrọ ntọala ime ka ezigbo mmetụta na obodo na aku na uba na mma ahụ ike. A narị afọ mgbe e mesịrị, anyị ka na-eme nke a.
The University of Afọ inwe kwuru oghere nke theSheffield Institute maka translational Neuroscience na onyinye nke £ 8m si obodo benefactors na ndị ọrịa’ iche iche. The center emezu ọnụ mbepụ nnyocha n'ime akwara ozi ọnọdụ dị ka Motor Neurone Disease, Parkinson na Alzheimer.
Anyị Advanced Manufacturing Research Centre bụ UK si eduga mahadum-n'ichepụta ụlọ ọrụ mmekota. N'akụkụ Boeing na-apụta-Royce, 60 onye ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na 200 University mkpara (75% bụ postgraduates) na 150 -Isi ka Trust-amụ ọrụ.
A carbon-anọpụ iche Factory nke Future na-anọdụ agbapụtawo colliery ala, nke na-anọchi obodo imu, na AMRC aha ya bụ Boeing Supplier of the Year megide iwu site 17,000 ụlọ ọrụ ụwa - na oge mbụ a aha na-arahụ na UK.
Project Sunshine Aims njikota ike nke anyanwụ mee nnukwu ihe ịma aka nke chere ihu n'ụwa taa: ihe ndi a ọnụ nri na na ume mkpa nke ndị bi n'ụwa na ihe ndị ọzọ na-ejighị n'aka ihu igwe na uwa na gburugburu ebe obibi mgbanwe.
The Grantham Centre na-ewuli anyị groundbreaking Project Sunshine nnyocha n'ime ihe oriri na ume nche. The Grantham Centre Aims na-enwe ọganihu ndị sayensị nke nkwado na jikọọ ya na iwu arụmụka gburugburu otú ụmụ mmadụ pụrụ ibi na a ọzọ adigide ụzọ.
Energy 2050 explores otú anyị nwere ike ịkpali a ala, ala-na-carbon ike usoro. Ụzọ nke na-agwa ndị ike Mmaji ịma aka nke-akpọsa ọnụ, ala na-adigide ume.
Sheffield Political Economy Research Institute (olileanya) -eweta ọnụ na-eduga mba ndị nnyocha na-elekọta mmadụ na sayensị, amụma eso ụzọ, ndi oru nta akuko na uche formers ka echiche na ịzụlite substantive amụma ime ihe a na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na nsogbu akụ na ụba aka nke zuru ụwa ọnụ ego nsogbu na ya ketara.
Nakwa dị ka na-achọ outwards, anyị nwere ikop eme nke oma n'ime. Mkpa nke ụmụ akwụkwọ na-apụta ìhè anyị pụtara ìhè arụmọrụ na National Student Afọ Ojuju Survey.
The University of Sheffield Mmụta’ Union na-anọgide gosiri n'elu na mba na Times Higher Education Student Ahụmahụ Survey.
Anyị na-ahụ anyị na ụmụ akwụkwọ bụghị nanị dị ka ọkụ eletrik ma ka na-emepụta ihe ọmụma, creativity na mmetụta. Ọmụmaatụ, Sheffield Volunteering na Sheffield Raising na-enye Onyinye (nkikara akwa), ma na-agba ọsọ site Mmụta’ Union, enyere anyị na ụmụ akwụkwọ-eme ka a dị iche na ndị obodo.
Sheffield Volunteering bụ otu n'ime ndị kasị ibu mmemme ụdị ke UK. Ọ bụ ihe nlereanya nke kasị mma omume na esetịpụ newSheffield Volunteer Standard.
Anyị obodo oru ngo na-kere na-agba ọsọ site ụmụ akwụkwọ. Ha na-enye dị mkpa support na netwọk n'ime obodo na-enye ọrụ na uzọ ọzọ ga-adị.
Otu ihe atụ bụ English ọha mmadụ N'ihi na Ịhụnanya nke Akwụkwọ oru ngo. Ha uri ọmụmụ na obodo ya ndò ụlọ nwere ọma aka belata anọpụrụ onwe ha iche na mma ahụ ike na ọdịmma nke ọtụtụ ndị agadi.
Sheffield nkikara akwa dị adị nye aka ụmụ akwụkwọ bulie ego maka ọrụ ebere na-akpata. Nkikara akwa mkpa bụ na ndị obodo ha. Afọ gara aga 82% nke ego zụrụ e nyere ka charities na mpaghara South Yorkshire na North Derbyshire ebe.
The nkikara akwa Committee ahazi a usoro ihe omume nke fundraising omume na ihe omume maka ụmụ akwụkwọ na-akụkụ na ofụri agụmakwụkwọ. Nwanne ha nwaanyị kọmitii Bummit ahazi kwa afọ UK hitchhike nakwa dị ka mba ofesi ọrụ ebere hitchhike. Nkikara akwa na-akwado ọha mmadụ, egwuregwu klọb, -arụ ọrụ kọmitii, dị iche iche na ndị mmadụ na-fundraise maka charities ha na-ahọrọ site oru ngo dị ka ịmụta-a-Charity atụmatụ.
Anyị na-merie ndị Duke nke York si Community Initiative Award - a mbụ maka ihe ọ bụla mahadum. Nke a bụ n'ihi na oru ngo includingPhilosophy na City (-agba ọsọ site ụmụ akwụkwọ na Department of Philosophy); -amụrụ nlekota nke na-eto eto si napụ ebe; omume maka ụmụ bụ ndị nwetara ahụmihe ezinụlọ ọnwụ; na a center àjà free iwu support obodo.
Faculty of Arts na Humanities
Faculty of Medicine, Dentistry na Health
Archaeology aerospace Engineering Clinical Dentistry Animal na Plant Sciences Architecture Business Administration na Economics
English Automatic Control na Systems Engineering Human Communication Sciences Mgbakọ na mwepụ na Statistics East Asian Studies Kọmputa sayensị
French Studies Bioengineering Ofufe ọrịa, ọgụ & ọrịa obi Biomedical Science Economics English Studies
Germany Studies Chemical and Biological Engineering The Medical School Chemistry Education Executive MBA
Hispanic Studies Civil & Structural Engineering Neuroscience Molekụla Biology na Biotechnology Geography Psychology
History Kọmputa sayensị Nursing na midwifery Physics na Astronomy ozi School
Asụsụ na omenala Electronic na Ọdụdọ Engineering Oncology & metabolism Psychology Journalism Studies
music Materials Science and Engineering Health na njikọ Research (ScHARR) Landscape
Philosophy Mmụta mekanịkal injinịa iwu
Religion, Theology na Bible Management School
Russian na Slavonic Studies Politics
Sheffield Ụzọ Institute
Urban Studies na Planning
The University of Sheffield mepụtara si atọ obodo oru: na Sheffield School of Medicine, Firth College na Sheffield ụzụ School. The School of Medicine, tọrọ ntọala 1828, dị nnọọ ochie. Ya n'oge akụkọ ihe mere eme bụ nnọọ obi erughị ala na ọ zọpụta ida site mmeghe nke Firth College, nke ada n'elu ozizi niile isi sayensị achị ọgwụ ụmụ akwụkwọ.
Firth College bụ otu nke otu ìgwè ndị na mahadum kọleji tọrọ ntọala na mgbe e mesịrị narị afọ nke 19. Ọ mepụtara nke Cambridge University Extension Movement, a atụmatụ e mere iji mee ka mahadum ozizi na nnukwu obodo nke England, ọtụtụ nke kọrọ ọ bụla na mahadum ndokwa. The ịga nke ọma nke a ọmụmụ na Sheffield ada Mark Firth, a obodo ígwè emeputa, guzosie College na 1879 dị ka a center maka izi Arts na Science na-achị.
The Sheffield ụzụ School
The Sheffield ụzụ School bụ ngwaahịa nke obodo nchegbu banyere mkpa mma technical ọzụzụ nke ndị ikom ahụ maka na-agba ọsọ oké ọrụ nke Sheffield, karịsịa steelmaking. A ije malitere n'ime Firth College na-anakọta ego ike a technical ngalaba, nke e guzobere 1884 dị ka Sheffield ụzụ School. na 1886 na School kwagara ọhụrụ ogige na saịtị nke ochie Grammar School na St George Square.
na 1897, atọ oru e amalgamated site Royal Charter na-etolite na University College of Sheffield. Nke a nzọụkwụ bụ akụkụ nke atụmatụ ejikọta elu na Victoria University, a gọọmenti nke University Colleges na Manchester, Liverpool na Leeds.
site 1900, Otú ọ dị, ndị Federal University e disintegrating na n'ime afọ ole na ole onwe ha mahadum na-kpụrụ si atọ University Colleges.
on 31 Ka 1905 na University of Sheffield e nyere ya Royal Charter, na na July ọhụrụ Firth Court Building na Western Bank e meghere site King Edward VII na Queen Alexandra. St George Square nọgidere na etiti nke Applied Science ngalaba, na Arts, Medicine na Science na-chọpụtara na Western Bank.
The University na 1905
N'oge nke University ntọala na 1905 ha dị 114 ozi oge ụmụ akwụkwọ n'ọnwa degrees na Arts, Pure Science, Medicine na Applied Science. na 1919 mgbe alọta ex-servicemen gekwe na ọnụ ọgụgụ buru ibu, oge nile na-amụrụ ọgụgụ bilie a adịteghị ọgụgụ kasị elu nke banyere 1,000. Site mgbe ahụ Faculty of Applied Science ama kewaa Engineering na Metallurgy; na University mbụ Ụlọ Nzukọ nke Obibi (mbụ Stephenson Hall) e guzobewo; na Edgar Allen n'ọbá akwụkwọ meghere (1909).
N'oge ahụ University e dị ka mbọ iji na-abụghị ogo ozizi dị ka na-ezi ozi oge ụmụ akwụkwọ. Ọmụmụ kpuchie bụghị nanị na ọtụtụ ot agụmakwụkwọ kamakwa isiokwu dị iche iche dị ka ehi-Idebe, ụgbọ okporo ígwè akụnụba, Ngwuputa na aguba-egweri. N'oge Agha Ụwa Mbụ ụfọdụ n'ime ndị a na-anọchi ozizi (na ikere òkè) munitions eme, ọgwụ ngwa imewe na mmepụta, translation na ndọrọ ndọrọ ọchịchị.
N'etiti abụọ agha ozi oge na-amụrụ nọmba Nọsi'ike na banyere 750 na mmụba n'ime ọhụrụ ebe nke ọkachamara ozizi na nnyocha iso nwayọọ nwayọọ. Agha Ụwa nke Abụọ mere ka ọhụrụ ebe nke ọkachamara research na ọzụzụ – na, ọmụmaatụ, Rada, dietary na vitamin ọmụmụ, mmepụta nke ọgwụ na-akụnwụ na chemical (dị ka ndị nọ n'ọnọdụ ihe na mbụ dị si Europe), ndọta, mmanụ ụgbọala mmepụta na aku na uba, naval cartography, iko rụpụta na English asụsụ ozizi.
Ebe ọ bụ na Agha Ụwa nke Abụọ
Ebe ọ bụ na Agha Ụwa nke Abụọ, ọtụtụ ndị agadi ụlọ e ada n'ime agụmakwụkwọ were na isi ọhụrụ ụlọ e wuru – na Main Library na 1959, na Arts Tower, Hicks Building, Alfred Denny Building, Sir Robert Hadfield Building, Chemical Engineering Building, University House, ise Ụlọ Nzukọ nke Obibi na Union of Mmụta na 1960.
New ụlọ maka Geography na Psychology soro na 1970, tinyere Crookesmoor Building (maka Iwu na Management), ndị Royal Hallamshire Hospital, na nzube-wuru na-amụrụ flat. The esote afọ iri hụrụ mmeghe nke Octagon Center, na Sir Henry Stephenson Building (maka engineering), na isi extensions na Northern General Hospital.
Na 1990s, ọhụrụ ogige maka School of Clinical Dentistry, na Management School, na Division nke Education, St George si Library (incorporating Blackwell si University Bookshop) na St George na flat na Lecture Ụlọ ihe nkiri meghere, ọnụ na extensions ka Stephenson, Halifax, na Tapton Ụlọ Nzukọ nke Obibi, na atọ ọhụrụ nkanka nke na-amụrụ flat.
The Regent Court ụlọ, nke ụlọ ndị Ngalaba nke Computer Science na Ozi Studies na Sheffield Center maka Health na njikọ Research, na-dechara. The Union of Mmụta wara a £ 5 nde development mmemme, rụọ ọdịmma, na-elekọta mmadụ na nzukọ ụlọ ọrụ.
Ịgbaso University si mwekota na Sheffield na North Trent College of Nursing na midwifery na 1995, a usoro owuwu nyere ọhụrụ ụlọ ọrụ maka ọrụ nọọsụ na midwifery ozizi na nnyocha. Nke a na-agụnye ndọtị na akakabarede nke St George na Hospital saịtị na Winter Street, na ndị na-ewu a ọhụrụ ụlọ na Northern General Hospital.
Narị afọ nke 21
The University nke oké ọchịchọ ala atụmatụ iso n'ime narị afọ iri ọhụrụ. Campus ose agụnye £ 80 nde refurbishment usoro ihe omume laboratories na ahụ ike, ndu na nke anụ ahụ na sayensị:
Omenala-wuru University Health Center
Multidisciplinary interdisciplinary Center nke Social Sciences
Ọzọ na oru ngo na-agụnye:
The Diamond, ihe £ 81 nde ụlọ ahụ na Jessop East saịtị, nke nwere ọkachamara engineering ozizi ụlọ ọrụ, nakwa dị ka ihe nkuzi ekiri fim, nzukọ ọmụmụ ụlọ, open-plan mmụta oghere, Ọbá akwụkwọ ọrụ na-elekọta mmadụ oghere. Ọ na-atụghị ime ka £ 44,5 nde n'ime obodo na aku na uba n'oge ewu na-adọ na afọ mbụ nke ọrụ, na-aga n'ihu na-enwe kwa afọ onyinye Sheffield aku na uba nke £ 20,6 nde.
A £ 20 nde refurbishment anyị na inwe-emeri Students’ Union na ịrịba ama University House ụlọ. The abụọ ụlọ e revamped na ike ike pụtara ìhè ụlọ ọrụ na ọrụ maka ụmụ akwụkwọ, mkpara na ọbịa
An £ 8 nde ego omume na Faculty of Medicine, Dentistry na Health
A £ 21 nde Faculty of Engineering Ukpep School, na Pam Liversidge Building, featuring ọkachamara ụlọ ọrụ maka engineering Postgraduate ụmụ akwụkwọ
Refurbishment anyị ịrịba mezuwo II * depụtara Arts Tower ụlọ
Atọ ụlọ maka ngalaba nke Arts na Humanities: The Jessop Building, The Soundhouse na Jessop West
£ 160 nde ụlọ usoro redevelop residential ulo na Endcliffe na Ranmoor saịtị
Nraranye nke £ 20 nde North Campus (ụlọ ndị Kroto Research Institute na Nanoscience na Technology Center)
The ewu nke £ 23 nde n'ọbá akwụkwọ ụlọ, ozi Commons
The mile-ogologo 'campus’ ugbu a na-esetị fọrọ nke nta unbroken si St George Square n'ime Crookesmoor, na-amụrụ obibi lekwasị ke ịta ahịhịa, n'ebe ọdịda anyanwụ nke University. N'ihi na nke mbụ 50 afọ nke ịdị adị, na University nke ozi oge na-amụrụ bi emeghị ebili n'elu 2,000. site 1980, Otú ọ dị, ya ruru 8,000 na na 2006 ọnụ ọgụgụ nke ndị ozi oge ụmụ akwụkwọ rịruwo 21,000. Mkpokọta na-amụrụ bi bụ ugbu a 27,000 na-agụnye ụmụ akwụkwọ si n'ụwa nile.
Ị chọrọ atụle University of Sheffield ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Sheffield na Map
photos: University of Sheffield ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Sheffield.
Soas na-ekwu, University of London London